News Blog of Indian Tagged "Madadaalo" - THE INDIAN FACE
10ka tartamada isboorti ee aadka u daran iyo dhacdooyinka
Soo ogow tartamada isboorti ee ugu fiican iyo dhacdooyinka Yurub iyo adduunka!Waxa jira kulanno badan oo adduunka ka socda, laga soo bilaabo tan ugu daran uguna asalka ah, ilaa ugu caansan, halyeeyada iyo “Caadi ahaan”. Akhri oo bartaan 10-ka tartamada ee aadka u xun adduunka.
10 TALOOYIN KU SAABSAN DHAQANKA KOOWAAD
Markaan ka fikirno isboortiga xad-dhaafka ah waxa ugu horreeya ee maskaxda ku yimaadda waa isbadal iyo adrenaline. Difaaca dabeecadda iyo tijaabinta xaaladdeena bini'aadamka waxay noo horseedaa inaan dareeno inaan ku noolahay wadada dhab ahaan. Laakiin gadaal kasbashada kaste, markasta waxaa jira sheeko weyn ... sheeko run ah! Ragga geesiga dhabta ah, meelaha dhabta ah.
Sawirkii ugu dambeeyay ee BMX Triple Backflip ee Taariikhda: yaab
Baabuurkii BMX ee New Zealand. Jed Mildon wuxuu taariikh sameeyay 28-kii Maajo, 2011 isagoo noqday qofkii ugu horreeyay ee si guul leh ku taabta baaskiilkiisa kadib markii uu sameeyay sedexleeg dhabarka gadaashiisa intii lagu gudajiray Unit T3 Mindtrick Jam ee Taupo, New Zealand. Mildon, oo 24 jir ahaa
Diyaarinta tabaha barafka barafka ugu wanaagsan ee sanadka 2014
Waxaan soo marnay fiidiyowgan kaas oo isku keenaya xeeladaha ugu fiican iyo laadadka barafka ah ee barafka lagu arkaayo internetka intii lagu jiray sanadkii tegay 2014. Boggan waxaan ku baranay inaan ka hadalno xiddigaha, hibada weyn, ciyaartooyda toosan iyo dillaacyada dhabta ah ee guddiga iyo barafka
Bandhigga BASE boodhka: laba vidiyo oo aadan seegi karin
Maanta waxaan soo qaadaneynaa labo fiidiyow oo Bruce Jumping ah oo uu soo saaray Richi Navarro, oo ah kooxdeena BASE ee kooxda ka socota The Indian Face. Midka hore waa boodh sixir, qofkii ugu horreeyay, laga bilaabo saldhigga Boí-Taüll (Lleida). Cajiib. Midda labaad waa labo ka boodbood ka badan ugaadhsadeha adrenaline
Buugga lagu taliyay: Barafka barafka: tabaha jimicsiga iyo farsamooyinka jimicsiga
Maanta waxaan kuu soo qaadanaynaa talo soo jeedinta buug aad waxtar u leh haddii midkaagu uu barafka ku duubayo qaab cabbir la’aan ah. Waxaa loogu magac daray "Barafka barafka: Qalabka nashaadka leh iyo farsamooyinka" Alexander Rottmann; Daabackiisii ​​ugu dambeeyay ayaa laga soo bilaabo 2010, waxaa laga heli karaa Isbaanish waxaana ku jira 160 bog oo macluumaad ah oo ku saabsan diyaarinta
Waxyaabaha ugu caqliga badan ee caqliga-liita si ay u dhex galaan barafka
Gudiga Snoogee Fikradu waa fududahay, ku wareeji mootada barafka. Si kastaba ha noqotee, natiijada ugu dambeysa waa mid ka fog sidii ay u muuqan lahayd wax noqon doona moodada. Waxay noqon kartaa wax lagu raaxeysto in yar, waa suurtagal, laakiin haddii aad lacag ku maalgaliso kubad baraf ah waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad ku lumiso inaad ku miiqdo miiqitaan
Dukumiinti ku saabsan isbeddelka isboorti ee aadka u xun ee ku yaal Canal Historia
Maanta waxaan idin kula wadaageynaa dokumentiyo ka socda Canal Historia kaas oo horumariya isbedelka iyo jiritaanka isboortiga aadka u xun ee adduunka, labadaba biyaha iyo jiilaalka, iyo sidoo kale isboortiga cusub iyo isbedelada cusub ee soo ifbaxay sannadihii ugu dambeeyay.
Fiidiyowyada cajiibka ah ee Elias Ambühl
Waxaan horay uga wada hadalnay Elias Ambühl maqaal ku yaal balooggan Janaayo 24. Gudaha waxaan kuu sheegaynaa in Elias uu ku dhashay Maarj 26, 1992 iyo in uu yahay cayaaraha fudud ee Switzerland. Wuxuu ku tartamay qaybta slopstrong tartankii FIS Freestyle World Ski 2013.
Asalka Skate: dokumentiga Dogtown iyo Z-Boys
Haddii maanta aad haysatid waqti firaaqeed oo aadan aqoon waxa aad ku maalgelinaysid, waxaan kugula talineynaa inaad daawato dokumentigan. Kani waa dokumentiga Dogtown iyo The Z Boys, oo cinwaankiisu yahay Isbaanish, laga soo bilaabo 2001 waxaana hagaya Stacy Peralta.
Waan Rideynaa: dokumenti dukumintiga taariikhda Barafka loo yaqaan 'Snowboarding'
Haddaad tahay qof jecel adrenaline iyo barafka barafka aad adigu tahay, maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dokumenti muujinaya inaadan joojin karin daawashada ... kani waa Waxaan Ride: dokumentiga taariikhda barafka barafka. Gacan gacanta ah oo gubasho ah oo ay soo saartay Grain Media, We Ride waa dokumenti xiiso leh oo ku saabsan taariikhda barafka.
Filimka 'Candide Thovex' ee cajiibka ah ee caanka ah ee lagu ciyaaro ee 'frelete ski'
Candide Thovex waxay haysataa cinwaanka mid ka mid ah xiddigaha ugu weyn adduunka guud ahaan freeski. Isaga laftiisu had iyo goor wuxuu odhanayaa: "Waxaan u daayaa barafku inuu ila hadlo." Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa muuqaal fiidiyow ah oo freeski virtuoso ah oo aad ku dhowaad dareemi karto soo jiidasho cajiib leh qofka koowaad.
Guddi aan caadi aheyn oo loogu talagalay barafka iyo barafka labadaba
Maanta waxaan rabnaa inaan isku dayno inaan kugu la yaabno muuqaalkan fiidiyowga ah ee aan helnay ee na qarxiyay. Raga ku sugan Signal Snowboards waxay naqshadeeyeen oo dhiseen, oo ay weheliso kooxda Lithe, guddi loo isticmaali karo isteerinka laakiin sidoo kale u geyn karo barafka ilaa barafka.
Waxa ugu wanaagsan Mountain Bike sanadkii 2014
Maanta waxaan rabnaa inaan kula wadaagno oo aan ku tusno fiidiyaha ugufiican ee Mountain Bike ee lagu sameeyay 2014 Dagaalkii Cairns 2014 Tijaabada muuqaalka ah ee tartanka caalamiga ah ee Mountain Bike kaas oo ka dhacay kaymo la ilaaliyo maalinta roobka. Waxay u qalantaa inaad si taxaddar leh u fiirsato.
Fiidiyowyada ugu fiican ee iskeytka barafka ee 2014 sida laga soo xigtay Red Bull
Fiidiyowyada iskeytka ugu wanaagsan ee 2014 marka loo eego Red Bull Maanta waxaan rabnaa inaan ku tusno isugeyn ku saabsan fiidiyowyada iskeytka ugu wanaagsan ee la diiwaan geliyey 2014, marka loo eego mid ka mid ah isboortiga ugu waaweeyn ba'an: Red Bull. Ku raaxayso! Laydhka Ordos: magaalada cirfiidka Waa koox ka mid ah barayaasha jimicsiga adduunka oo dhan
10 buug oo si aad ah loogu talinayo
10 buug oo si aad ah loogu taliyay oo ku saabsan boodhka iyo iskeytka, maanta waxaan kugula talineynaa 10 akhrin oo ay tahay inaad tixgeliso haa ama haa. Ku dhiirrigeli geesiyaasheeda Buugani wuxuu soo aruuriyaa sawirro uu soo qaaday Glen E. Friedman oo ku saabsan adduunyada 'punk, hip hop' iyo 'skate'. Astaamaha Zboys ayaa la tilmaamay
Kubadda cagta ee firfircoon: laba fiidiyow oo ah khiyaamo kubadeed oo cajiib ah
Kubadda Cagta: laba fiidiyow oo ah khiyaanooyin kubadeed oo cajiib ah Haddii aad jeceshahay kubbadda cagta iyo nacasnimada, sawirradan kama dhignaan doonaan kuwo aan xiiso kuu qabin. Haddii aadan jeclayn kubbadda cagta oo aad doorbideyso isteerinka ama cayaaraha barafka, waxaan u maleynaynaa inaad sidoo kale jeclaan laheyd inaad soo ogaato waxa ay qaar awooda kubbadda ku ciyaaraan
Ciyaaraha ugu caansan uguna caansan guga / xagaaga
Isboortiga ugu caansan ee guga / xagaaga XUUQ Bungee booda waa isboorti xad dhaaf ah halkaas oo qofku ka boodboodo meel sare oo ubax ah, oo lagu hayo bilowga xarig xarig ah. Ka boodista Bungee waxaa laga samayn karaa dusha sare, sida buundooyinka, dhismayaasha dhaadheer, dooxooyinka
Sida loo wado fuulista bushkuleeti alwaax guriga lagu sameeyo oo guriga lagu sameeyo
Sida loo fuulo bushkuleeti alwaax guriga lagu ciyaaro Sergio Layos waa mid ka mid ah kuwa maanta ugu muhimsan ee raacdeeyayaasha BMX. Markii ugu horreysay ee uu fuulo baaskiil noocan oo kale ah, wuxuu jiray 11 sano jir. 13 jir, wuxuu kaalinta labaad ka galay horyaalnimada adduunka ee Boortaqiiska
Didga the catater skater waa xiddig ku sugan skatepark
Hadaad jeceshahay bisadaha iyo waliba iskeytiska, waxaan helnay fiidiyow aan kuu daaya doonin. Waxaad u arki doontaa bisadda Didga, oo sayid u ah sayidkiisa barafka maxaa yeelay waa wax la yaab leh skateboard-ka. Miisaan culeyskaada xagga dambe ee istaraatiijka, kor iyo hoos u fuulasha
Wakeboarding with Ferrari F50
Bal u fiirso muuqaal cajiib ah oo aan soo marnay. Waan ognahay inaad jeclaan doontid. Ma taqaanaa baraarugidda? Waxay ka kooban tahay ficil la mid ah doonnida oo guddi ku xidhan xadhig ku xidhan doon lagu isticmaalo, maadaama ay tahay anshax xumo uur ku jirta.
7 'cajiib ah' iyo isboorti cajiib ah oo ay tahay inaad ogaato
Maanta waxaan rabnaa inaan ku tusno isboorti taxane ah oo naadir ah oo cajaa’ib leh, qaarkoodna waxoogaa xad dhaaf ah sidoo kale, kuwaas oo ku noqonaya kuwo moodada meelo ka mid ah adduunka, oo aan joojinayn ku darista kuwa raacsan oo aan u maleynayno inaad jeclaan laheyd inaad ogaato. Xitaa qaar iyaga ka mid ah farsamo ahaan sharci ahaan sharci uma aha qatarta ay mataleyso.
Mountain Bike oo ku taal Jamaica, muuqaal cajiib ah
Jamaica, oo ah jasiirad jasiiradeed oo ku xeeran Greater Antilles, oo ay ku nool yihiin ku dhawaad ​​seddex milyan oo qof, 600 kiiloomitir u jirta Bartamaha Ameerika iyo 150 kiiloomitir koonfur ee jasiiradda Cuba, ayaa ah meesha ay ku dhasheen laba jilaa weyn oo qayb ka noqon doona taariikhda: Bob Marley duurka muusigga iyo Usain Bolt